Fampidirana fihenjanana fihenam-bidy dia ampiasaina amin'ny zoro, fifandraisana, ary ny fifandraisana amin'ny terminal. Ny tariby vy mifono vy dia manana tanjaka matanjaka, tsy misy fihenjanana mifantoka, ary mitana andraikitra amin'ny fiarovana sy ny fidirana an-tsokosoko fanampiana tariby optika. Ny fitaovana dia misy: tariby miady saina efa an-dàlam-by, fitaovana fampitaovana fanohanana. Ny herin'ny tady tariby dia tsy latsaky ny 95% ny tanjaky ny tariby. Ny fametrahana dia convenie ...
JK Type clip tariby vy
Ny tadin'ny tariby vy dia ampiasaina hifehezana ny tariby vy. Satria mafy ny tariby vy dia tsy mora vonoina ny fanidiana farany, noho izany ny karatra tariby vy dia ampiasaina hamehezana ny fatotra. Araka ny hatevin'ny tariby vy, ny maodelin'ny ny karatra tariby vy dia hafa ihany koa, raha ilaina, arakaraka ny hatevin'ny tariby vy hividianana ny maodely takiana. Ny clip tariby vy dia mety amin'ny fifandraisana amin'ny tariby varahina sy tariby aluminium ary tady tariby vy amin'ny fitaovana fandrefesana angovo herinaratra. Io ...
Ny hardware dia karazana tanjona maro samihafa, ohatra, ny fametrahana tariby misy tariby misy tariby isan-karazany, ny firafitry ny peratra fanantonana tady insulator, ny tariby mampifandray amin'ny tsindry isan-karazany, ny fantsona, ny famitana ny conducteur misaraka amin'ireo karazana bara elanelanelana, sns. , ary miaraka amin'ny tilikambo misy tariby isan-karazany, ary koa mifandraika amin'ny haben'ny conducteur dia ampiasaina ho fiarovana, dia tsy maintsy miara-miasa. Izy io dia mifandraika amin'ny fiarovana ny tariby na ny tilikambo, na dia iray amin'ireo fahavoazana aza, ...
Fametahana fampiatoana ho an'ireo mitondra jumper kambana
Katalaogy No. Azo ampiharina amin'ny savaivain'ny tariby Dimension lehibe （mm） Enti-mandanjalanja voafaritra （KN） Milanja （kg） L1 L2 CR h ∅ M XTS-1 18 ~ 24 200 50 19 13 57 18 16 70 4.5 XTS-2 25 ~ 31 200 56 19 16 62 18 16 70 5.0 XTS-2A 17 ~ 21 200 50 19 11 57 18 16 70 4.5 XTS-2B 21 ~ 27 200 52 19 14 59 18 16 70 5.0 XTS-5 23 ~ 33 200 60 20 17 55 18 18 100 4.2 XTS-6 34 ~ 45 ...
Lozisialy fanamafisam-pahefana elektrika misy lovia lohan-doha hexagon misy loaka pin misy fisarahana
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD NO.279 Weishiyi Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China Email ： cicizhao@xinwom.com Tel ： +86 0577-62620816 Fax ： +86 0577-62607785 Finday: + 86 15057506489 Wechat ： +86 15057506489 WhatsApp ： +86 15057506489